Sina: Ady mafy vao mba tafody hihaona amin’ny fianakaviana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Febroary 2009 18:01 GMT
Dia lavitr'ezaka no mialoha ny Lanonamben'ny Lohataona fety malaza ho an'ny rehetra, Raha ny mahazatra hatrizay dia andro vitsy mialohan'ny fiandrasana ny Taombaovao Sinoa izy io no manomboka. Ary rehefa tonga indray ny fotoana hifandaozan'izy ireo amin'ny fianakaviany, dia tapitra eo koa ilay fialantsasatra fohy fa dia lavitr'ezaka hafa indray no hitondra ho any an-tany lavitra ny tanànany any.
Ny Dia lavitra rehefa Lanonamben'ny Lohataona, na Chunyun, no tena lehibe indrindra raha resaka fivezivezen'olona isan-taona ary ahitàna hatrany amin'ny mpandeha 2 lavitrisa isan-taona, anatin'ny fotoana fohy tsy mihoatra ny 40 andro akory. Tamin'ity taona ity ny Taombaovao dia ny faha 26 Janoary. 15 andro talohan'io no efa niainga ny Chunyun; androany, 31 Janoary, manomboka kosa ny dia be fodiana.
Ny fanitarana ny tanàn-dehibe haingam-pandeha loatra nefa mikorontana koa indraindray tao Sina dia nanome teorana ny dikan'ity “fivoriam-pianankaviana” ity. Mpiasa 200 tapitrisa avy any amin'ireo faritra ambanivohitra no miasa any an-tanàn-dehibe ary mamela ny fianakaviany manontolo any aoriany mba hahafahana miaina tsaratsara kokoa. Ny fetin'ny lohataona, ho an'ny maro amin'izy ireo, no hany fomba hihaonany amin'ny fianakaviany indray noho ny halafon'ny fodiana an-trano.
Tany Beijing, mpivarotra tapakila iray, namoaka tapakila avy amin'ny milina nefa tsy nivarotra izany tamin'ny mpandeha, fa nampirina izany, na teo aza ny laharan'olona lava be niandry teo, nisy naka horonan-tsary an-tsokosoko tamin'ny finday, ary tsy ela taorian'izay dia efa nipariaka tamin'ny aterineto izany. Ahian'ny olona ho natokana ho an'ny mpivarotra an-tsokosoko ireny tapakila ireny. Olona an'arivony, tanaty fientanana lehibe ho fanehoana firaisan-kina, no niara-nanameloka io mpiasa io.
楚天阁 any Tianya dia miteny:
Tandindon'ny fomba fiasan'ny vondrona iray manontolo ihany ny an'ilay mpiasa, ny Minisiteran'ny lalamby, izay mitantana ny lalamby rehetra manerana an'i Sina, antsoin'ny olona hoe “Zokiben'ny lalamby.” Ilay mpitoraka blaogy Zhu Weidong dia manao fanamarihana amin'ny maha-kidaladala ny ampihimamba amin'ny lalamby, izay heveriny fa resaka saro-takarina:
Lahatsoratra iray notanisain'ny haino aman-jery ofisialy Xinhua, mitondra ny lohateny hoe “ny olan'ny famatsiana tapakila dia mahalaza betsaka momba ny fanitàrana ny tanan-dehibe“, no nandalina sy nanipika ny anton'ny fahasarotan'ny fiverenana mody. Raha ny fijerin'i Den Yu-wen, mpitoraka blaogy, dia tsy tsara toy ny fanaovana ny tanàn-dehibe ho toeram-ponenana sahaza ireo mpiasa nafindra toerana ny fanatsaràna ny fitaterana.
Ilay mpitoraka blaogy Willings (驿动的心) dia manoratra lahatsoratra manohina ary mamintina hoe, “Rehefa takatrao ny Sina ankehitriny dia fantatrao ny Chunyun ( ny dia lavitr'ezaky ny lohataona ).”